Ahmed Ould Cabdalla oo ka Dariyay Xaalada Dalka Somaliya | maakhir.com
Ahmed Ould Cabdalla oo ka Dariyay Xaalada Dalka Somaliya
Brussels:- Wakiilka Gaarka ah ee Q.M u qaabilsan arimaha Somaliya Ould Cabdalla ayaa ka dayriyay xaalada ay ku nool yihiin Qaxootiga Dalka Somaliya ku dhibaataysan, Masuulkaasi oo haatan jooga xarunta Dalka Blegum-ka ee Brussels ayaa shaaciyay inay maalin kasta ka soo darayso xaalada Dalka Somaliya ee Murugsan.
Axmedu Ould Cabdalla ayaa ku canaantay Soomaalida inay dalkoodii burburiyeen, wadashaqeynna la sameyn waayeen Qaramada Midoobay sanadkii 1991-kii markii loo soo gurmaday ee ay dalka Somaliya ka dhaceen Dagaalada Sokeeya.
“Somaaliya waxay iska dhega martay Dadaalo kasta oo ay wadeen Beesha Caalamku markii ay dhacday Dawladii dhexe ee Dalka Somaliya ka talin jirtay waxay bilaabeen inay isu laayeen Reer iyo Qosqoys marnaba kama ay asan Tashan Xaalada Dalkooda iyo Mustaqbalka uu yeelan doono”Saasa waxa yiri Ahmed Ould Cabdalla.
Ahmedu Ould Cabdalla mar uu ka qeybgalay kulan ka dhacay magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub waxa uu wasiirada 27-ka dale e EU-da uu u sheegay inay wax badan ka sameeyaan gargaarka dhanka bani’aadamnimada ah ee dalka Soomaaliya oo quudiyeen Boqolala kun oo Qoys kuwaasi oo la ildaran Nolol xumo.
Masuulkaasi waxa uu farta ku fiiqay inay Masuuliyada Dalka Somaliya ay kaalin wayn ku leeyihiin Q.M kuwaasi oo aan cidan ku halayn Buu yiri Dalkaasi ay dagaaladu la Degeen.
Dhanka kale waxa uu walaac xun ka muujiyay dagaalada ay Dawlada kula jiraan Kooxaha Mucaaradka ah oo uu sheegay inay wakhtiyadan danbe sii laba jibaareen Dagaalada ay kula jiraan Dawlada Somaliya.
« Gudoomiye Xigeenka Rugta Ganacsiga Maamulka Puntland oo xalay ay weerar ku qaadeen Kooxo hubaysan
Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf oo booqday gooba badan oo ku yaala Magaalada Bosaaso »